हिटलरको यौन सम्बन्धी गोप्य कुरा - Everest Dainik - News from Nepal
एजेन्सीः विश्वकै सबै भन्दा ठूला तानाशाही मानिने हिटलरको जन्म अप्रिल २० मा भएको मानिन्छ । उनको जन्म १८८९ अप्रिल २० कै दिन भएको थियो। बाहिरी दुनियाका लागि हिटलर जति क्रुर थिए।
याे पनि पढ्नुस किन हरेक महिलामा फरक यौन चाहना हुन्छ ? कसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ ?
याे पनि पढ्नुस कुमारीत्व निलाम गर्ने युवतीको घोषणा
हिटलरका बारेमा यस्ता समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए की उनले पुरुषसँग पनि यौन सम्बन्ध बनाउने गरेका थिए। उनी समलिंगी भएको बताइन्छ।
एक मिडिया रिर्पोटका अनुसार हिटलर र उनका पुरै सेना समलिंगी भएको मान्न सकिन्छ। उनका जीवनीमा आधारिक केही पुस्तकमा पनि उनी समलिंगी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
ट्याग्स: यौन, हिटलर